नेपाल एक कृषि प्रदान देश हो । नेपालको खाद्यान्य बाली मध्य धान एक प्रमुख खेतिको रुपमा मानिन्छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को सिफारिसमा ०६१ साल मंसिर २९ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट असार १५ गतेलाई धान दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।त्यसै अनुसार आजको दिन अर्थात असार १५ लाई नेपालीहरुले विशेष धान दिवश मनाईएको पाइन्छ । यसरी विभिन्न किसिमका धानहरु उत्पादन गरी...
नारि दिवसले दिनुपर्ने सन्देश ।
हरेक वर्ष मार्च ८ मा अन्तर्रा्ष्ट्रिय नारी दिवश हामी सबैले मनाउँदै आएका छौं । यो कुनै नौलो कुरा भएन । मार्च ८ शोषणबाट मुक्तिको महाभियानको शुरुवात भएको दिन हो । तर, अझै पनि नारीहरु पुर्ण अधिकारसम्पन्न भइसकेका छैनन । त्यसकारण मार्च ८ को सान्दर्भिकता अझै पनि उस्तै छ । नारी संसारका निम्ति महत्वपुर्ण सिर्जना हो । जसको अभावमा संसार अघि बढन सक्दैन । हाम्रो बोलिचालिको...
कोही महावीरसँग ऋचा शर्माले मूर्ख भनेको भिडियो छ ?
सन् २०१६ आयोजना भएको एक नेपाली साहित्य फेस्टिबलमा नायिका ऋचा शर्माले हिरोको परिभाषाको विषयमा प्रस्तुत गर्नुभएको विचारदेखि नै उहाँ बौद्धिक फिल्मीकर्मी हुनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, त्योबेला उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको तर्कमा कुनै बहस अनि विवाद भएन । किनकि, मानव मनको एउटा कुना नकरात्मकताले बनेको हुन्छ र त्योकुना नै जीवनमा धेरै हाबी हुन्छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ...
अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी - अहिले राजनीतिक दलहरुले चुनावलाई लक्षित गरी चन्दा उठाइरहेका छन् र त्यस्तो चन्दाको स्रोत उद्योगी व्यवसायीलाई बनाइरहेका छन् । चन्दा दिनेले पनि आफ्नो घर घरनाबाट दिने त होइन, आफ्नो बाउ बाजेको सम्पत्ति बेचेर त कसैले पनि दिँदैनन् । उनीहरुले पनि उद्योगको उत्पादनमा लागत बढाएर, वस्तुको भाउ बढाएर नै दिने हो । चुनावका लागि दिइने चन्दालाई उत्पादित...
प्रकाश ढकाल – आइतबार पहिलो चरणमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा स्थानीय तहमा खसेको भन्दा कम मत खसेको छ । स्थानीय तहको चुनावमा झण्डै ७५ प्रतिशत मत खसेपनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको पहिलो चरणमा ६५ प्रतिशत मात्र मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यो स्थानीय तहको भन्दा झण्डै दश प्रतिशत मत हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी बाजुरामा ८० प्रतिशत भोट...
मेरो देश सर्बिया हो। म यहाँ एक स्वतन्त्र र गैरनाफामूलक मिडियामा प्रधानसम्पादक छु। गत महिना मैले थाहा पाएँ, हामीले फेसबुकमा पोस्ट गरेका समाचार पाठकहरूसम्म पुग्न छाडेका छन्। म छक्क परेँ। हाम्रो वेबसाइटमा पाठक आउने मुख्य बाटो भनेकै फेसबुक थियो। हामी त्यसैबाट हराइरहेका थियौं। हाम्रो दर्शक संख्या ह्वात्तै घटेको थियो। यसो हुनुमा हाम्रै केही प्राविधिक त्रुटि होला भन्ने...
ज्योतिष बलराम उपाध्याय खकुरेल ज्योतिष शास्त्रमा बिभिन्न कुराहरुको वर्णन गरिएको छ । हिन्दु धर्मशास्त्रहरुका अनुसार कुनै पनि केटा र केटीको विवाह गर्दा सम्बन्ध राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विचार गर्नुपर्छ । यस कुराको विचार ज्योतिष गणनाको आधारमा हुने गर्छ । कसरी केटा वा केटीको विवाह जुर्छ जुर्दैन थाहा पाउने गरिन्छ त ? प्रायः विवाह जुर्छ कि जुर्दैन भनेर केटा र केटीको गुण...
मिलन तिमिल्सिना - देश चुनावको मुखमा छ । नेता, कार्यकर्तादेखि आमनागरिकलाई चुनाव लागेको छ । दलहरुको घोषणापत्र र नेताहरुले भाषणमा भनेजस्तो देशले छिटै काँचुली फेर्छ भन्नेमा नागरिकलाई विश्वास त छैन, तर चुनावले लामो समयदेखिको संक्रमणकाल अन्त्य गर्छ भन्ने आशा चाहिँ सबैमा छ । त्यसैले स्थानीय तहको चुनावमा उत्साहजनक रुपमा सहभागी भएका नागरिक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको...
ज्यो. बलराम उपाध्याय खकुरेल - वास्तुशास्त्र अनुसार विभिन्न दिशाहरुको विभिन्न स्वभावहरु छन् । दिशाहरुको स्वभाव अनुसारका संरचनाहरु त्यस दिशामा बनाउनु राम्रो मानिन्छ । पूर्व दिशाबाट सूर्योदय हुने भएकाले यस दिशाबाट निकै राम्रो उर्जाहरु आउने मान्यता रहेको छ । त्यसकारण पूर्व दिशालाई अन्य दिशाहरु भन्दा निकै महत्वपूर्ण मान्ने गरिन्छ । पूर्व दिशाको मालिक देवताहरुका राजा...
म ९० सालको भूकम्प जाँदा १० महिनाकी थिएँ । जन्मेको चाहिँ बनेपा घोगेचौर बस्नेत गाउँमा हो । अहिले त्यहाँ अस्पताल बनेको छ । ६ जना बामध्ये म माइलाको छोरी । बुवा रोपलाइनको चेक गर्ने सुबेदार हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेला रोपवेबाट भारी आउँथ्यो नि त ! देशमा नेताको कारणले धेरैले दुःख पाए । बेला बेलामा हुने आन्दोलन, लडाई र हिंसाका कारण धेरै नागरिकले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ , कतिले त...
शान्ति थापा – म ९० सालको भूकम्प जाँदा १० महिनाकी थिएँ । जन्मेको चाहिँ बनेपा घोगेचौर बस्नेत गाउँमा हो । अहिले त्यहाँ अस्पताल बनेको छ । ६ जना बामध्ये म माइलाको छोरी । बुवा रोपलाइनको चेक गर्ने सुबेदार हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेला रोपवेबाट भारी आउँथ्यो नि त ! देशमा नेताको कारणले धेरैले दुःख पाए । बेला बेलामा हुने आन्दोलन, लडाई र हिंसाका कारण धेरै नागरिकले सास्ती व्यहोर्नु...
भूकम्प पीडितका लागि मेरा दुई मुख्य एजेण्डा छन्
युवराज भुसाल मेरो मान्यता सबैभन्दा पहिला भोकोलाई खाना दिनु हो । त्यसपछि मात्र कहाँ सुत्ने र के ओढ्ने भनेर सोच्न सकिन्छ । हामी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको चरणमा छाैं । त्यसैले पहिलो आवश्यकता अस्थाई टहरा र पालमा बस्नुभएका भूकम्प प्रभावितलाई छानामुनी राख्नुपर्ने छ । भूकम्पले घरबास बिहीन हुनुभएका दाजुभाई दिदिबहिनीको आँसु पुच्छ्नुपर्ने मुख्य दायित्व छ । उहाँहरु झण्डै...
विष्णु विश्वकर्मा – ‘........ यो मेरो गाडीको नम्बर टिपिराख । कतै दुर्घटना भइहाल्यो भने म त्यो बस दुर्घटनामा परे की परेन भनेर तिमीलाई कन्फर्म गर्न सजिलो हुन्छ ।’ पूर्व सहकर्मी सीमा खड्का (हाल अमेरिका) ले गतवर्ष सँगै रेडियोमा समाचार पढ्दै गर्दा भनेका यी शब्दले मन चसक्क घोचेको थियो । कतै आफैँलाई यो हविगत आइलाग्छ कि भनेर । शनिबार बिहानै धादिङको गजुरीबाट बस त्रिशुलीमा खसेर...